Hem / Xaqaaga iskoolka	/ Waxaad xaq u leedahaay in aad codkaaga dhiibato
Waqti waxaad joogtaa iskoolka marka waxaad xaq u leedahay in aad ka qayb qaadato oo aad saameyn kartaa sida uu iskoolka u shaqaynayo. Waxay noqon kartaa tusaale ahaan sida ay xisada tahay, waqtiga fasaxa iyo nidaamka sharciga oo laraacayo.
Dhammaan waxa eey xaq u leeyihiin in eey ka qeyb qaataan oo eey saameeyaan
Dhammaan ardayda waxa ay xaq u leeyihiin in ay ka qeyb qaataan oo ay sheegaan sida ay jecelyihiin in ay waxbarashadoodu noqoto iyo waxa ay ka qabaan dhamaan iskoolka. Tusaale ahaan banaanka iskoolka, meesha lagu cunteeyo, meesha lagu shaahaysto iyo inta kale oo iskoolka ka tirsan.
Macalinka waa in uu waafijiyaa waxbarashada si ay ugu haboonaato dhamaan fasalka, waana muhiim in aad wada hadashaan dhamaantiin si ay qofwalaba ugu fiicnaato sida macquulka ah.
Nidaamka sharciga waa muhiim, waana in ay ardayda dhan yaqaaniin oo ayna fahmaan si ay dhamaan u isticmaalaan. Ardayda waa in ay ka qayb qaataan marki uu iskoolka qorayo nidaamka sharciga. Markaa kadib waxaa go'aaminaya maamulaha.
Ururka ardayda tusaale ahaan golaga wakiillada ardayda oo ay ardaydu isugu tagto oo ay uga xaajoodaan suaalaha ay u arkaan muhiim. Wayna banaantahay in ay yeeshaan kulamadaa waqtiga iskoolka, maamulahana wuu dhagaysanayaa waxa ay ardayda u soo bandhigaan.
Fasallada 7-9 iyo dugsiga sare waxaa kale oo ay leeyihiin wakiilka difaaca ardayda. Wakiilka difaaca ardayda wuxuu kuu suurto galinayaa in aad maamulaha kala hadasho sida uu jawiga shaqada ee iskoola uu yahay. Waxay ahaan kartaa in ay xuntahay nadaafada suuliga/musqusha, in ay qabow tahay ama in ay ardayda jadwalku ciriiri ku yahay. Ardayda ka tirsan wakiilka difaaca ardayda waxay xaq u leeyihiin in ay iskoolka ka helaan waxbarasho iyo fasax hadii ay u baahdaan si ay shaqadooda u qabsadaan.
Hadii ay kula tahay in uu iskoolku ku dhagaysanaynin
Suaalaha ugu badnaan waxa aa ugu danbayntii go'aan kooda iskaleh maamulaha iyo macallinka. Laakiin waxay mar walba ku qasban yihiin in ay raacaan sharciga iskoolka u yaalla, tusaale ahaan sharciga iskoolka. Hadii ay kula tahay in uu iskoolka sharciga raacaynin waxaad la hadli kartaa qofka iskoolka dhan xakuma, madaxa ka sareeya maamulaha. Waxaa kale oo aad dacwo u diri kartaa annaga oo ah kormeerayaaasha iskoolka, wixii dheeraad ah halkan ka aqriso: